Rita, Writing for My Sake!: ဒေါက်တာ သန်းထွန်း (၄)
Posted by Rita at 7/23/2010 10:27:00 AM
ဆရာကန့်တော့ပွဲနဲ့ပက်သက်တဲ့ သူ့အမြင်ကလည်း ကျောင်းသားတိုင်းကို သူ့စိတ်နဲ့နှိုင်းပီး သမထားလိုက်တာ..
အခြားအချက်ကတချို့တလေကတော့ ယူတတ်ရင်ကောင်းပါတယ်.. အလုံးစုံကို ခြုံလိုက်ရင်တော့ တကဲ့ လူ့ဂွစာပဲ။
တော်ပါသေးရဲ့ သူလိုလူမျိုးဆရာ မတော်ခဲ့မိလေလို့ နို့မို့ဆို နေရင်းထိုင်ရင်း ငရဲရနေမှာ အသေအချာ။
ဘာလို့ဆို ခုချိန်ထိ ၉တန်းတုန်းက ဆရာတယောက်ကို အခဲမကျေနိုင်နေလို့ပဲ။ တော်ပါသေးရဲ့ မကြုံခဲ့မဆုံခဲ့လို့
တင်ပြပေးတဲံ ရီတာကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မဖတ်ဘူးဘူး ဒီစာအုပ်။
ကျွန်မကတော့ သူ့လိုဆရာမျိုးနဲ့ မတွေ့ခဲ့ရတာရယ် သူ့စာအုပ်တွေ အဖတ်နောက်ကျခဲ့တာရယ်ကို နှမျောနေမိတာ။
ဒါဆို ရီတာက ကိုယ့်ကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတွေကို ငါ့မိဘပိုက်ဆံပေးထားလို့သူတို့တွေငါ့သင်ပေးတာလို့ဆိုလိုတာလား..
အမဘ၀မှာတော့ တအားကိုကောင်းတဲ့ ဆရာအတော်များများနဲ့ဆုံဖူးတော့ အလုပ်ထဲရောက်တော့ အခက်အခဲကြုံတိုင်း ဆရာတွေသင်ခဲ့တာ ဒီလို.နဲ့ ကိုယ်တကယ်ပက်သက်ခဲ့တဲ့ ဆရာတွေကို သတိရမိတယ်။ကျေးဇူးလည်းတင်မိတယ်။
ဒါကတော့ ပေးသူနဲ့လက်ခံသူ စေတနာကွာမယ်ထင်တယ်။ စေတနာမပါတဲ့ဆရာတွေတော့ အမလဲတာ့တာပဲ..
သူက အရင်အပိုင်းတွေတုန်းက ဆရာကိုလုပ်ချင်လို့လုပ်နေသူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်.. အရင်ကတော့ ဒါ ဘယ်သူ့မှသိပ်မထိခိုက်လို့ (ဒါတောင် သူနဲ့ပက်သက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ထိခိုက်ချင်ခိုက်ဥိးမှာ)ဘာမှမပြောပေမဲ့..အခုလို သူက ဆရာကန်တော့ပွဲကိုတိုက်ခိုက်တာရယ် ကျောင်းသားတွေက ဆရာတယောက်ကိုကန်တော့တာနဲ့ စာမေးပွဲအောင်ချင်လို့ကန်တော့တာ ဟုတ်မှမဟုတ်ပဲ
လေးစားသင့်လေးစားထိုက် ကျေးဇူးတင်သင့်ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့ဆရာမှန်သမျှ အမအတွက်တော့ဆရာပဲ
သူပြောတဲံ့ "မင်းတို့ပေးတာက နည်းတယ်။ ငါက ပြန်ပြီး နိဗ္ဗာန်ဆု မပေးနိုင်ဘူး၊ မင်းတို့နဲ့ မတန်ဘူး" တကယ်ကို ဘုရားတမိတယ်..အမသာဆို အတော့်ကိုစိတ်ဆိုးမှာ ဘယ်လိုမှ မပြေနိုင်တဲ့ စိတ်ဆိုးခြင်းပဲ တခါတည်းကို လူငယ်က လူကြီးကို မထေမဲ့မြင်ပုံစံကိုပြောင်းသွားမှာ အသေအချာပဲ။
အစ်မ မြင်သလို မမြင်မိဘူး။ ခုအစ်မ ပြောလိုက်မှ အော် အဲလို မြင်လို့လည်း ရပါလားလို့ တွေးမိတာ။ အစ်မတွေးတာတွေနဲ့ ညီမတွေးမိတာတွေနဲ့ အတော့်ကို ဆန့်ကျင်တယ်။
(ဒါဆို ရီတာက ကိုယ့်ကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတွေကို ငါ့မိဘပိုက်ဆံပေးထားလို့သူတို့တွေငါ့သင်ပေးတာလို့ဆိုလိုတာလား..)
အဲဒီစကား ပြောစရာ အချက်အလက်ကို ဘယ်နေရာမှာမှ ပါတယ်လို့ မထင်မိဘူး။ အစ်မ ဘယ်နေရာကို ဖတ်ပြီး ပြောနေတာလဲ။ ညီမမိဘတွေကလည်း ဆရာတွေကို ပိုက်ဆံပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ ဆရာတွေကို ပိုက်ဆံပေးထားတာ အစိုးရက မဟုတ်ဘူးလား။
သေချာတာကတော့ ဒီလို ဆရာမျိုးနဲ့တွေ့ခဲ့ရရင်
ညီညာထကြွ ဆုံးမနာယူ လာမူကြိုဆီး ထံနီးလုပ်ကျွေးပြီးတော့ကို သင် တွေး အံ ရွတ် တပည့်ခံလိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ် ရှိတယ်။
ဒေါက်တာသန်းထွန်း စာတွေကို ရှာပြီးဖတ်စေချင်ပါတယ်...ဘယ်အကြောင်းအရာမဆို သတိလက်လွတ် မဝေဖန်သင့်ပါ
အကြံပေးတာကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အဲလိုဆရာရဲ့စာကိုဖတ်မှ စာတတ်သွားမယ်ဆိုလည်း စာမတတ်တာကိုပဲ ကျေနပ်စွာခံယူပါ့မယ်
ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ်ကို လူကြီးတွေနဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ယူဖတ်တာတော့ သိပ်မမိုက်ဘူးဗျ.
အစတည်းက ဒီအစည်းအဝေးက အရေးမပါဘူးထင်ရင် မတက်နဲ့ပေါ့။ ကိုယ်စိတ်မ၀င်စားနိုင်တဲ့ အထင်မကြီးနိုင်တဲ့ နေရာကို ဒီလိုလူမျိုးက အောင့်အီးပြီးသွားနိုင်တာ ကျနော်အံ့သြမိတယ်။
နောက်လူထူထူမှာ သူများညံ့ဖျင်းပုံ (သူကတော့ တကယ့်ဂရိတ်တွေကို မှလို့ဆိုပါတယ်)ကို ပြောတယ်ဆိုတာကရော ပညာတတ်တယောက် အထူးသဖြင့် သူလိုထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ သူတယောက်အနေနဲ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သလား?
လူတယောက်ရဲ့ အမှားကို ဝေဖန်ထောက်ပြတာ မှန်အောင်ပြင်စေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်။ လူထူထူမှာ အရှက်ကွဲစေ အကျိုးနဲစေဆိုတာမျိုးတော့
ိငိုမလို ပြိုမလိုတွေထက် ဆိုးမှာပဲ..
ကျနော် သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ရသလောက် ကြိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု့ကိုလဲ တကယ့်ကိုချီးကျူးလေးစားမိတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိလ်လို့ လက်ခံပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အပြောအဆို သိပ်ပြီးမညက်ညောတာ၊ တချို့အချက်တွေမှာ မလိုအပ်ပဲ ဂွတိုက်ပြနေတာဟာ
တမင်တကာ လူစိတ်ဝင်စားခံချင်လို့များ လုပ်ပြနေသလားလို့ တွေးမိတယ်ဗျ။ သူ့ရဲ့ သိစိတ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် မသိစိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ..
နောက်တခု.. အကြီးအကျယ် အငြင်းပွါးဖွယ် ကိစ္စတခုကို အစပျိုးပေးပြီး သူက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထွက်ထိုင် နေတာမျိုးဆိုပါတော့။ ဒါက လူပျိုကာလသားတွေ စုံတုန်း နောက်ချင်ပြောင်ချင်စိတ်နဲ့ ဆိုရင်တော့ ကောင်းသားပဲ။ သူတို့လို အခြေအနေမျိုးနဲ့ ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ တမျိုးပဲလို့ တွေးမိတယ်။ တခုတော့ရှိတယ် ဒီလူတွေ ဘာမှသေသေချာချာ မစဉ်းစား မတွေးခေါ်ကြဘူး။ အပေါ်ယံကြောတွေ.. ကဲ ငါစပေးခဲ့မယ်..တွေးကြ ပြောကြ ငြင်းကြလေရော့ဟယ် ဆိုပြီးများ လုပ်သလားတော့မသိ=)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်ကတော့ သူဟာလူတော်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့ အပြောအဆို အပြုအမူတွေက respect နဲတယ်ထင်မိတယ်။
မနက်က စာရိုက်ရင်းနဲ့မို့ နည်းနည်းလိုသွားတယ်။
မမြတ်နိုးတွေးတာတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာ ဒေါက်တာသန်းထွန်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စကိုတင်ပြောတာပါ။
ဆရာကျေးဇူးကိစ္စကိုပြောတာမဟုတ်။ ဘာလို့ဒါကို ဆွဲထည့်ပြောတာလည်းဆိုတာ နားမလည်ပါ။ ဘာလို့ဆို တင်ထားတဲ့ ပို့စ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်လို့။
((ဒါဆို ရီတာက ကိုယ့်ကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတွေကို ငါ့မိဘပိုက်ဆံပေးထားလို့သူတို့တွေငါ့သင်ပေးတာလို့ဆိုလိုတာလား..)) လို့ မေးစရာအချက် ဘယ်နေရာမှာမှ မပါဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
စံတွေဟာ မတူကြဘူး။ နောက်တစ်ခု သူလုပ်ခဲ့တာ သူဖြတ်သန်းလာခဲ့တာ သူတွေ့ကြုံလာခဲ့တာတွေကို တိတိကျကျ ကိုယ်တို့ မသိနိုင်ဘူး။ ကိုယ်တော့ မသိဘူး။ သူ ဘယ်လို စိတ်ရင်းနဲ့ လုပ်တယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်စိတ်နဲ့ မှန်းကြည့်ဖို့ပဲ တတ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်က သူလိုလူမျိုးအပေါ်မှာ ယုံကြည်စိတ်ရှိတော့ ကိုယ်မှန်းကြည့်လို့ရတဲ့ အဖြေဟာ phyoaung မှန်းကြည့်လို့ရတဲ့ အဖြေနဲ့ တူချင်မှတော့တူမယ်။
respect နည်း များ ကိစ္စကတော့ ဒီ comment ရဲ့ အစဆုံးစာကြောင်းကိုပဲ ပြန်ဖတ်လိုက်ပါ။
ကိုယ်ကတော့ ဘယ်သူ့ကိုတော့ ဘယ်သူနဲ့ မနှိုင်းပါနဲ့တွေ ဘယ်သူဖြစ်လို့ ဘယ်လို မဝေဖန်ပါနဲ့တွေ ပြောရစကောင်းသည် မအောက်မေ့လို့ ကိုယ် တန်ဖိုးထားပြီး ရိုက်တင်နေရတဲ့ ဒေါက်တာသန်းထွန်းနဲ့ ငိုတော့မလို ပြိုတော့မလို နိုင်ငံရေး ဇာတ်မင်းသားလိုဟာတွေကို နှိုင်းရကောင်းလားလို့ စိတ်ထဲ မရှိပါဘူး။
တစ်ခုပဲ။ တန်ဖိုးထားရာစံတွေ မတူကြဘူးဆိုတာကို ထပ်တွေးမိရုံပဲ။ ငိုတော့မလို ပြိုတော့မလို နိုင်ငံရေး ဇာတ်မင်းသားလိုဟာတွေကို ဒေါက်တာသန်းထွန်းထက် ပိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလည်း အဲဒါ phyoaung ရဲ့ စံနှုန်းတစ်ခုလို့ပဲ ယူဆလိုက်ရုံပါပဲ။
တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူမ စိတ်ကောက်စိတ်ဆိုးတုန်းက သူ့သွားစောင့်ရင်းနဲ့ ဒီဒေါက်တာသန်းထွန်း အီးဘွတ်ကို ကုန်အောင် ဖတ်မိတာပဲ မှတ်မိတယ်။ :P
ဆရာကြီးကို လေးစားပါတယ်။ No man is perfect ဆိုတော့ ပညာအရာနဲ့ ပတ်သက်ရင် သူသိပ်တော်ပေမယ့် တခြား လူမှုရေးရာကိစ္စမျိုးမှာ လိုအပ်မှုတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့အမြင်ကို သဘောကျတယ်၊ သူ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို လေးစားတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မဝေဖန်ချင်တော့ဘူး။ ကိုယ့်ဆန္ဒအရ ခွဲထားလိုက်တယ်။
ဇွန်လည်း မဖတ်ဖူးသေးတဲ့ စာအုပ်မို့ ပြန်ရိုက်တင်ပေးတဲ့ ရီတာ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆရာကြီးက ကျမလေးစားရတဲ့ ဆရာတစ်ဦးပါ။
ဆရာစာတွေ ဖတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မရီတာ.. ကျနော်က တန်ဘိုးခြင်းနှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကျင့်စရိုက်ကလေးတခုကိုပဲ နှိုင်းယှဉ်ပြောခဲ့တာ..ဥပမာ ပန်းမခူးရ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျနော့်အိမ်နားက အပျိုမလေးက အမှတ်တမဲ့ ခိုးခူးလိုက်တာမြင်ရင် ကျနော်ပြုံးချင် ပြုံးမိသွားနိုင်တယ်.. သူ့နေရာမှာ ဂျူးဆိုရင်တော့ လုံးဝ ကျနော်ပြုံးမိမှာ မဟုတ်ဘူး။
လူတိုင်းမှာ သူ့တန်ဖိုးနဲ့ သူရှိကြစမြဲပါ. ကျနော်ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်လို့ သူတို့ကို နေရင်းထိုင်ရင်း ကြည့်မရတာမျိုး မရှိသလို ကယ်တင်ရှင်ကြီးတွေပဲဆိုပြီး အလိုလိုနေရင်း ကြည်ညိုနေတာမျိုးလဲ မဟုတ်ပါဘူး. စိတ်ကုန်မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ လူရော ၊ မူရော ကုန်စရာတွေ တော်တော်များပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေကိုလဲ မကြိုက်၊ ပြောင်းလဲအောင်လဲ ဘာမှ မလုပ်နိုင်၊ လုပ်နိုင်အောင်လဲ မကြိုးစားတဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင်စိတ်ကုန်တဲ့ စာရင်းထဲ ထိပ်ဆုံးက ထဲ့ထားလို့ရသေးတယ်။ ဒါကြောင့် သူများကို ကျနော် ဘာမှမပြောလိုတော့ဘူး။ လူတိုင်းမှာ အားသာချက်၊ အားနဲချက်ဆိုတာရှိတယ်လေ။ လုံးဝပါဖက်ဖြစ်တဲ့ သူဆိုတာတော့ ကျနော်မတွေ့ဘူးသေးဘူး..
တန်ဖိုးချင်း နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောတယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆို တန်ဖိုးချင်းသာ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောမယ်ဆိုရင် phyoaung လောက် ချောက်ကျမယ့်သူ ရှိမှာကို မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဆိုလိုတာက ယှဉ်ခွင့်မရှိဘူး။ ယှဉ်တာကို ကိုယ်လက်မခံနိုင်ဘူး ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ချောက်ကျမယ် ဆိုတာက အလွတ်သဘော ပြောလို့မရတဲ့ ကိစ္စအတွက် ဒီနှစ်မျိုးနှစ်စားကို နှိုင်းယှဉ်ဖို့ရာ အချက်အလက် ရှာရတာ ဘယ်လောက် ဂွကျလိုက်မလဲ တွေးမိလို့ပါ။ ဘယ်သူ အဲလောက် စွန့်စားရဲပါ့မလဲ လို့ အမှန်အတိုင်း တွေးမိလို့ပါ။
ကျန်တာတွေကတော့ ဆွေးနွေးလောက်တာ မရှိပါဘူး။ ပြောနေတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ ဘာမှမဆိုင်လို့။ ကိုယ်က ဒေါက်တာသန်းထွန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ပြောဆိုပြုမူသွားတာတွေကို သဘောကျတယ်။ တန်ဖိုးထား လေးစားတယ်။ အားလုံးကိုယ့်လိုပဲ ဖြစ်မှာပဲလို့တော့ မတွေးဘူး။
ခုပဲကြည့်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းအပြုအမူကို ခါးခါးသီးသီး ဖြစ်နေတဲ့လူတွေ ပါလာတာပဲ မဟုတ်လား။ မဖိတ်ခေါ်လည်း ရောက်လာတာပဲ မဟုတ်လား။ သူလုပ်ရတဲ့ သူပြုမူရတဲ့ နောက်ခံအကြောင်းရင်းတွေ ကိုယ်တွေးကြည့်လို့ရ၊ နားလည်လို့ရ လေးစားကြည်ညိုလို့ရပေမယ့်၊ မရတဲ့လူကတော့ ငိုမလို ပြိုမလိုထက်ဆိုးတယ်လို့ မြင်တာပဲ မဟုတ်လား။
ဒါတွေက စံ မတူလို့ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ စံထားတာခြင်း မတူလို့ ကွဲပြားသွားတဲ့ အမြင်တွေလို့ တွေးရုံကလွဲလို့ ဘာမှ ညှိစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ တူဖို့လိုတယ်လည်း ကိုယ် မထင်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ပြောစရာရှိရင် ပြောလိုက်။ ပြောပြီးသွားမှ သူများကို ဘာမှ မပြောချင်တော့ဘူးလို့တော့ ဘာဖြစ်လို့ သုံးနေမှာလဲ။ ပြောပြီးနေမှကိုး။ ပြောတာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ပြောလို့ ကုန်သလောက်ရှိမှ မပြောချင်တော့ဘူး ဆိုတော့လည်း ဘာဆက်ပြောရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။
ကိုယ့်ဘလော့မှာတော့ အားနာစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း အားနာလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်နဲ့ပေါ့။
ကျနော်ကတော့ အားနာတတ်တယ်..အထူးသဖြင့် အရေးတကြီးကိစ္စမဟုတ်ရင်ပေါ့..ကျနော့်စိတ်ထဲ တကယ်လိုအပ်တယ် အရေးကြီးတယ်ထင်မှသာ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောတတ်လုပ်တတ်တဲ့သူမို့ပါ..
တော်ရုံကတော့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေ့ါပေါ့ပါးပါးပဲ သဘောကျတယ်လေ..ဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးဆိုတာကလဲ ဇတ်သမားလိုလိုလို့ မရီတာ ပြောခဲ့တဲ့ သူတွေကိုပါ။ အခုပိုစ့်နဲ့ သိပ်မဆိုင်ပေမဲ့ ကွန်မင့်မှာ စကားစပ်မိလို့ပါ..အမှန်က ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ ငါ့အကြောင်းဖတ်ပြီးကတည်းက ပြောချင်နေတဲ့ စကားအချို့ကို. ပြောစရာကမကြုံဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခုကြုံတာနဲ့ ဖိတ်ခေါ်မဲ့သူမရှိဘဲ ၀င်မန့်လိုက်တားး((
ကျနော်သူ့အပေါ်ထားတဲ့ စံက အရမ်းမြင့်နေလို့ အားမလိုအားမရဖြစ်မိယုံလောက်ပါ.. သူက ဒေါက်တာသန်းထွန်းဖြစ်နေလို့ကို သူပြုမူရတဲ့ အကြောင်းအရာ အချို့ကို နားလည်အောင်မကြိုးစားခဲ့တာလဲပါသပေါ့ကွယ်..အင်း..သူလဲလူထဲကလူပဲလေ..ကိုယ်အထင်ကြီးတိုင်း အများကြီးမျှော်လင့်ချင်လို့ ဘယ်ရမလဲနော် ))
သြော် နောက်တခု..ကျနော် နားမလည်တာက
"နိုင်ငံရေး ဇာတ်မင်းသားလိုဟာတွေကို ဒေါက်တာသန်းထွန်းထက် ပိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလည်း"..ဆိုတဲ့စကားက တန်ဖိုးခြင်းနှိုင်းယှဉ်တဲ့ သဘောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလား..ဒါဆိုကျနော် နားလည်မှု့လွဲပြီး ပြန်ရှင်းပြတာ ဖြစ်မယ်မရီတာ ဆောရီးပဲနော်..
တကယ်တော့ phyoaung ရေးချင်နေတဲ့ အဓိကအကြောင်းက ဇာတ်သမားလိုလို ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိစ္စ ဖြစ်ရမယ်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းက ကြားများညပ်သွားလေသလားမသိ။
(ငိုမလို ပြိုမလိုတွေထက် ဆိုးမှာပဲ..) ဆိုတဲ့ စကားကြောင့် ("နိုင်ငံရေး ဇာတ်မင်းသားလိုဟာတွေကို ဒေါက်တာသန်းထွန်းထက် ပိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလည်း") ဆိုတဲ့စကားက ဖြစ်လာရတယ် ဆိုတာ နားလည်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်း အပြုအမူက (ငိုမလို ပြိုမလိုတွေထက် ဆိုးမှာပဲ..) ဆိုတော့ ငိုမလိုပြိုမလိုတွေကမှ ပိုကောင်းဦးမယ်။ တော်သေးတယ် လို့တော့ ယူလို့ရတာပေါ့နော်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ပိုကောင်းတယ်ထင်လည်း (တနည်း) ပိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလည်း ဆိုတာကို သုံးလိုက်တာ။ ယှဉ်ပြောလို့လည်း ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ နှိုင်းရကောင်းလားလို့ ကိုယ်က ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အတိအလင်းပြောပြီးသား။ ဒါပေမဲ့ နှိုင်းပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ မမျှော်လင့်ဘူး။ ဒါကို ဆိုလိုတာပါ။
ခါးခါးသီးသီး မဖြစ်ဘူးဆိုလည်း မဖြစ်ဘူးပေါ့။ ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဖြစ်လည်း ဘယ်သူကမှ ဘာမှ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။
တခုတော့ပြောချင်တယ်။ "သူ့အပေါ်အရမ်းမျှော်လင့်ထားလို့... ထားထားတဲ့ စံက အရမ်းမြင့်နေလို့ ဆိုတာ... နည်းနည်း စကားလုံး ပြင်ပေးရင် ရမလား... မြင့်တယ် နိမ့်တယ် ဆိုတာထက် စံနှုန်းတွေက မတူကြလို့ ဆိုတာမျိုး ပေါ့။ အထက်အောက် သဘောမဟုတ်ဘဲ... လယ်ဗယ်တူဖြစ်သွားအောင်လို့...
အနိမ့်အမြင့်သုံးလည်းပဲ ဘာမှတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ သုံးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားနာတတ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ အမှတ်တမဲ့ သတိမထားမိဘဲ ရှေ့နောက် လွဲသွားမစိုးလို့။
တော်သေးတယ် ကျနော်ဒီကွန်မင့်ကို သောကြာလိုနေ့မျိုးမှာ ပေးမိလို့..
မဟုတ်ရင် ဒုက္ခ =((
အစတည်းက နဲနဲတော့ စဉ်းစားသား။ မရီတာက စကားကို အလွန်ချက်ကျ လက်ကျ ပြောတတ်တာလို့..
ကျနော်အလွယ်တကူပြောလိုက်တဲ့ စကားကို အဲ့လို ချက်နဲ့လက်နဲ့ တလုံးခြင်းထောက်ပြပြီး မေးလိုက်ရင် ကျနော်လန့်လန့်သွားပြီး ခြေမကိုင်မိ၊ လက်မကိုင်မိဖြစ်သွားရော...
အမှန်က ဇတ်သမားက ကြားညပ်သွားတာပါခင်ဗျာ..
မူလပထမ ပြောလိုရင်းက ဒေါက်တာသန်းထွန်းကိုပါ။
စံဆိုတာကလဲ ကျနော်တဦးထဲရဲ့ မူပိုင်စံပါခင်ဗျာ..သူများထားတဲ့ စံနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တွက်ချက်ထားတာမဟုတ်ရပါ..
ကျနော်ပန်းမခူးရဆိုတဲ့ ဥပမာလေးနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်..ဒါက ကျနော်တဦးထဲရဲ့ အမြင်ပါ။ သူများအတွက်တော့ သဘာဝကျခြင်မှ ကျပါလိမ့်မယ်။
ငယ်ငယ်တုံးက ကိုယ်မသိတဲ့ အကြောင်းအရာတခုကို အဖိုးအဖွားတွေ၊ မိဘတွေကို မေးလို့ သူတို့ကလဲ မသိဘူးပြောရင် သိပ်စိတ်ဆိုးတယ်။ တွေ့သမျှဟာ ကောက်လွှတ်ပစ်ပြီး မရမက လှည့်ပတ်မေးနေတော့တာ။
စိတ်ထဲမှာ လူကြီးဆိုတာ မေးသမျှဖြေနိုင်ရမယ်။ ကိုယ်မသိတာတွေ သူတို့သိကိုသိရမယ်လို့ မှတ်တာ။ ကိုယ့်ရွယ်တူချင်း မတိမ်းမယိမ်းချင်းမေးလို့ မသိရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး..ရတယ်..
အဲ့လိုနဲ့ ကြီးလာတော့လဲ ကိုယ်အထင်ကြီးတဲ့ သူဆိုရင် ကိုယ်လိုသူလို ရိုးရိုးသဘောထားတဲ့သူနဲ့ ကျနော် စံထားတာခြင်းမတူတော့ဘူး..အဲ့ဒါပဲဗျ..ခုလဲ အဲ့ဒီသဘောပဲ။
ကျနော့်အမြင်ကို ရိုးရှင်းစွာပြောပြခြင်းသက်သက်ပါ.. စိတ်ထဲမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ သာစေနာစေ ဆိုတဲ့သဘောမရှိတာ တကယ်ပါ..
တကယ်တော့ ပန်းခူးတဲ့ ဥပမာဟာ ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ ကိုယ့်အတွက်တော့ တကယ်ကြောင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြောတဲ့လူက နှစ်ခါတိတိပြောလို့ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လိုဆိုတာကို ပြန်ပြောပါမယ်။
ပန်းမခူးရဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုလူက ခိုးခူးခူး ကိုယ့်အတွက် ပန်းခိုးခူးတာသာ ဖြစ်မှာပဲ။
တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ဂျူးဖြစ်စေ၊ ဒေါက်တာ သန်းထွန်းဖြစ်စေက တားမြစ်နေရာမှာ ခူးလိုက်တယ်ဆိုရင် အဲဒီလို ခူးရတဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ဟာ ခိုင်လုံပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ ကိုယ် အရင်ဆုံးကြည့်မိမယ်။ ပြီးရင် အဲဒီလို ခူးရတဲ့ တကယ့် နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို ကိုယ်သိအောင် လိုက်မယ်။ အတိအကျ မသိနိုင်ရင် မှန်းဆလို့ရမယ့် အချက်အလက်မှန်သမျှကို လေ့လာမယ်။
ဒါက အလုပ်သဘောကိုပြောတာ။ တကယ်တော့ ကိုယ့်အတွက် ဂျူးဖြစ်စေ၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်းဖြစ်စေရဲ့ တားမြစ်နေရာမှာ ပန်းခူးတဲ့ အမှုအတွက် သိုင်းဝိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ အချက်အလက်တွေက မြင်ရတဲ့ တခဏမှာတင် ရှိနေပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါပြောချင်သမျှ... စာအုပ်ကို ဖတ်မိတာ ခုတခေါက် အိမ်အပြန်မှ ဆိုပေမယ့် အဲဒီမတိုင်ခင်က သိထားပြီးသား အချက်အလက်တွေရယ်၊ အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ ပြမထားပေမယ့် မြင်သာစေတဲ့ အကြောင်းတွေရယ်က သူတို့ အပြုအမူကို နားလည်လက်ခံဖို့အတွက် နောက်ခံအကြောင်းတွေ ဖြစ်လာတယ်။
စံ ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်း၊ phyoaung နဲ့ ဒေါက်တာသန်းထွန်းကြိုက်တဲ့ တခြားလူတွေကြားက၊ ဒါမှမဟုတ် phyoaung နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကြားက စံ ဆိုတာကို ပြောတယ်ထင်တာ၊ ပြောချင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။
ဒေါက်တာသန်းထွန်းနဲ့ phyoaung ရဲ့ စံ နှစ်ခုကိုပဲ ပြောချင်ခဲ့တာ။ ခေါင်းထဲမှာ အဲဒါပဲ ရှိခဲ့တာ။
ကျွန်တော့ ကွန်းမန့်ကြတော့ ဘာဖြစ်လို့မတင်ပေးတာလဲ
july ကွန်မန့်ကို မတွေ့မိပါဘူး။
တခါတလေ အဲလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
comment ရေးတုန်းက တက်သွားတာ သေချာရဲ့လား။ err ပြသေးလား။ တခါတလေလည်း comment ရေးတဲ့သူက err မြင်လိုက်ရပေမယ့် မေးလ်ထဲ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။
ငါ့လက်ဝဲက လူကိုလည်း ငါ စေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်တယ်။ လက်ယာက လူကိုလည်း အားမနာတမ်း ကြည့်တယ်။ စေတနာ အချောင်းလည်း မမြင်ဘူး။ အပြားလည်း မမြင်ဘူး။ လခစားပဲ။
This is his point of view only.
I read all comments related post item